तोडियो डा. केसी र सरकारबीचको सहमति, डा. केसी आजैदेखि १६ औं अनसनमा
काठमाडौंः डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति बिपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।
सहमति तोडिएसँगै डा. केसी आजैदेखि अनसनमा बस्ने भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ को इलाममा उनी अनसन बस्ने बताइएको छ । उनको यो १६ औं अनसन हो ।
डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारले गत पुस १७ गतेसम्मको समय मागेको थियो । तर, सो समयभित्र माग पूरा नभएपछि डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आजका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए ।
अल्टिमेटमभित्र विधेयक पारित भएपनि डा. केसीको अधिकांश माग पूरा नभएकाले आजैदेखि उनले अनसन सुरु गर्न लागेका हुन् ।
डा.केसीसँगको सम्झौता विपरित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा विधेयक पारित गर्यो
यस्ता छन् डा. केसीको माग
२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने ।